အိုင်ဗရီကို့စ်: Gbagbo ICC ကိုရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအယူခံအပေါ်ယနေ့ fixed - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ "အိုင်ဗရီကို့စ်: Gbagbo ICC ကိုရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအယူခံအပေါ်ယနေ့ fixed - JeuneAfrique.com
နိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး၏အစိုးရရှေ့နေ (ICC က) ဟောင်းတဦးအိုင်ဗရီကို့စ်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Laurent Gbagbo ၏တရားသေလွှတ်အယူခံတနင်္လာနေ့ 16 စက်တင်ဘာလအပေါ်သန်းခေါင်တိုင်အောင်ရှိပါတယ်။ Cote d'Ivoire အတွက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ၏တစ်နှစ်၌ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဘို့ကိုဆိုင်းငံ့ဖြစ်ပါတယ်။
Gbagbo သူတနင်္လာနေ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွေ၏နှစ်ပေါင်း၏ epilogue ကိုသိကြလိမ့်မည်နည်း အားလုံးစွဲချက်သူ့ကိုဆန့်ကျင်ကျဆင်းသွားလျှင်ရှစ်နှစ်နိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး (ICC) ကရန်သူ၏အပြောင်းအရွှေ့နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်ပြစ်မှုသည်မိမိအပေါ်စွဲချက်တင်ပြီးနောက်, သူသိပါလိမ့်မယ်။ ဟောင်းများအိုင်ဗရီကို့စ်သမ္မတထို့နောက်လာမည့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်၏တစ်နှစ်ငှါ, အိုင်ဗရီကို့စ်တွင်နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းအပေါ်တစ်ဦးတစ်ကျော့ပြန်လုပ်လိမ့်မယ်။
ဇန်နဝါရီလအတွင်းကသူ၏တရားသေလွှတ်အောက်ပါ, ဒီ Saga အသစ်တစ်ခုကိုလှည့်ကွက်ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ Fatou Bensouda, အစိုးရရှေ့နေ, တရားခွင်အခနျးတရားသူကြီးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်တရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုအစစ်အမှန်ထိုးနှက်အယူခံရန်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြေညာဖို့ညဦးယံအချိန်နောက်ဆုံးနေ့သည်အထိရှိပါတယ်။
ဤဖြစ်ရပ်မှန်ကန်လျှင်, အယူခံကုန်သည်ကြီးများအသင်းမတိုင်မီရှိသည်လိမ့်မယ်နှင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးအားဖြင့်လျှောက်ထားသည့်ဥပဒေရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူပထမဦးဆုံးဥပမာပြောရရင်အတွက်ယူဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ညီညွတ်မှုအပေါ်မအုပ်စိုးလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ဇန်နဝါရီလအတွင်းရပ်ဆိုင်းတရားခွင်ကိုဆက်လက်အသစ်တစ်ခုစုံစမ်းရာကျင်းပနိုင်ရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်အစိုးရရှေ့နေပယ်ချနိုင်ပါတယ်။
အရာတစ်ခုမှာအချို့ဖြစ်ပါတယ်: ဤအသစ်သောဇာတ်လမ်းတွဲလပေါင်းများစွာကြာမြင့်မည်, အရင်အိုင်ဗရီကို့စ်အတွက် Laurent Gbagbo ၏ပြန်လာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေထိခိုက်မယ်လို့ အောက်တိုဘာလ 2020 အတွက်ကျင်းပမည့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ.
အစိုးရရှေ့နေအယူခံမပါဘူးဆိုရင်သို့သော်ယခင်သမ္မတအဖြစ်အမြန်ဆုံးအဖြစ်သူ၏ဇာတိမြေကိုရှာတွေ့၏အိပ်မက်မက်နိုင်နှင့်ပင်သမ္မတတစ်ဦးလေလံစဉ်းစားပါ။ သူသည်ဘရပ်ဆဲလ်ဒေသစွန့်ခွာဖို့ခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, လွှတ်ခြင်းကန့်သတ်ရုပ်သိမ်းလိမ့်မည်ဟု ICC ကိုများအတွက်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
မိမိအပြိုင်ဘက် Alassane Ouattara ရရှိရန်ပြည်နယ်၏ယခင်ခေါင်းကိုအဘို့တည်ပြန်လာနိုင်ဘူး။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလူနှစ်ယောက်၏ဆွေမျိုးသားချင်းများအကြား timidly စတင်ခဲ့ကြပေမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်လွယ်ကူသောမကြည့်ပါဘူး: လက်ရှိသမ္မတအမြဲတမ်းပြန်လာ Gbagbo ပြဿနာများဖန်တီးနိုင်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ကစားအတွက်နောက်ဆုံးကဒ်ရှိပါတယ်။ 2018 ခုနှစ်, Gbagbo အိုင်ဗရီကို့စ်အတွက်ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း 20 ထောင်ဒဏ်ခဲ့သည် နှင့် Abidjan အတွက်ဆိုက်ရောက်အပေါ်ထောင်ချခြင်းအန္တာရာယ်။
ထို့အပွငျကအရွယ်အစားနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံရေး၏ကတ်များပြန်လည်ဖြန်ဝေနိုင်ခဲ့သူပြန်သွားဖို့ချန်ထားလိမ့်မယ်။ Laurent Gbagbo မကြာသေးမီက Alassane Ouattara, Bédié၏ယခင်မဟာမိတ်ချဉ်းကပ်ထားပြီးအထူးသဖြင့်အဖြစ်။ အိုင်ဗရီကို့စ်လူကြိုက်များသောတပ်ဦး၏ဥက္ကဌနှင့်အိုင်ဗရီကို့စ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ဦးခေါင်းကိုပြီးနောက်ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးဇူလိုင်လတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ နှစ်ခုအဓိကအတိုက်အခံပါတီများစနေနေ့စက်တင်ဘာလ 14 အပေါ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပူးတွဲအစည်းအဝေးကျင်းပသမ္မတ Anti-Ouattara နဖူးကတိပေး။
ပါမောက္ခဂျင်း Bahebeck အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက၏ဘုတ်အဖွဲ့
အမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဦးတည်သွားစေရန် maneuvering သောကင်မရွန်းအတွက်အင်္ဂလိပ်အကျပ်အတည်း? - JeuneAfrique.com